Badingise oseqede imizi eyishisa | IOL Isolezwe
Badingise oseqede imizi eyishisa
Isolezwe / 28 January 2013, 10:17am / NOKUBONGWA PHENYANE
UNKSZ Sanelisiwe Cele ebhekisisa okusalile njengoba kukhona ingane ebibhubhisa ngomlilo imizi yabantu eZingolweni kungazeki ukuthi kwenzenjani
USAMANGELE futhi uyathuthumela uNkk Cele ngomuzi awakhe ngamandla akhe obhujiswe yintombazane ebicekela phansi neyomakhelwane
SEKUQUBUKE indida emphakathini waKwaDlovinga, Ezinqoleni ngemuva kokusha kwemizi eyisikhombisa okuthiwa ishiswe yintombazane yasendaweni okungaziwa ukuthi lesi senzo isenziswa yini.
UNtombikhona Zangwa (21), nonina uNksz Sibongile Zangwa batitinywe wumphakathi baxoshwa ngemuva kokusolwa ngokushisa umuzi wakwaMqadi okuzalwa kuwo usomabhizinisi waseMlazi uMax Mqadi, weMax’s Lifestyle.
Lezi zigameko ezenzeka ngezinsuku ezahlukene kuleya ndawo, sezishiye abantu bakhona bethukuthele njengoba ingaziwa imbangela yokushiswa kwemizi yabantu.
Le ntombazane okuthiwa izivumele yona ngesikhathi ihlaselwa wumphakathi ukuthi isuke ithunywe ngunina ukuthi iyoshisa imizi yabantu abahlukene kule ndawo.
Esigamekweni esenzeke ngeledlule lapho kushiswe khona umuzi wakwaMqadi, kusolwa ukuthi uNtombizikhona ungene kulo muzi kungekho muntu njengoba ogada khona ubesavakashele abangani bakhe.
UMnuz Sibonelo Cele ohlala kwaMqadi uthe umbonile uNtombikhona edlula kodwa wacabanga ukuthi uya komunye umuzi kwamalume wakhe oseceleni kwalapho ehlala khona.
“Le ngane ithungele izindlu ezimbili lapha ekhaya kwasha yonke into akade iphakathi. Mina ngizwe ngabantu akade ngihlezi nabo bengitshela ukuthi angibheke nayi le ngane iphuma ekhaya ngathi sisamangaliswe yilokho ngabona ngezindlu sezisha ubuhanguhangu sathi sifika sathola kungasangeneki,” kusho uCele.
Uthe umangele kakhulu ngoLwesithathu sekuphinda kukhalwa ngale ntombazane sekusha omunye umuzi wakwaCele.
UNksz Sanelisiwe Cele wakomunye umuzi okushiswe khona kule ndawo uthe wayehlezi naye uNtombikhona wathi esehamba wezwa ngabantu sebembiza bemtshela ukuthi nayi indlu isha kubo.
“Mina angazi ngizothi unathonya lini uNtombikhona ngoba wafika la ekhaya izinsuku ezintathu zilandelana ngingamnaki kodwa nginokusaba nokwathi esenyamalele ngingazi uyephi ngezwa ugogo engibiza ethi kuyasha embhedeni owawusendlini yakhe sawucisha,” kusho uSanelisiwe.
Uthe nangosuku olulandelayo wafika wezwa sekuthiwa kuyasha kwenye indlu nakhona bawucisha umlilo kodwa ngosuku lokugcina afika ngalo washisa endlini enkulu la kungaphumanga khona lutho.
“Umlilo uma usuke waqala kuba nzima kakhulu ukuwucisha ngendlela osuke unamandla ngayo,” kuchaza uSanelisiwe.
Elinye ilungu lomphakathi kule ndawo elingathandanga negama lalo lithe like lahlangana nalo wesifazane njengoba adingiswa wamtshela ukuthi usazobuya azoqhubeka la agcine khona.
Uthe lo wesifazane uma bembuza ukuthi ukwenzelani lokhu akaphumeli obala.
Amaphoyisa aKwaZulu-Natal asiqinisekisile lesi sigameko njengoba ethe lo wesifazane usagcinwe esiteshini samaphoyisa kuleya ndawo ngemuva kokuthi ehlaselwe wumphakathi.